पोखरामा सुन्तलाको व्यापार बढ्यो - Nepali News Portal
अशोक दर्जी आफ्नो घर झापा जान नपाय पनि ए आरको साथमा तिहार यसरी मनाय !
कुन कुन देश सङ भयो त ,१ सय १० देशमा श्रम स्वीकृति, ८ देशसँग मात्रै सम्झौत! थप
अहिल्यको सब कार्यक्रम वा महोत्सवमा , आयोजकको रोजाइमा अशोक दर्जि ,र टन्क बुढाथोकीको टिम पर्ने गरेको छ , नेपालमा मात्र नभई बिदेश बाट सम्म !
चर्चित बालकलाकार ए आरले आफ्नै बुवालाई टंक दाई आखिर किन के कारणले भने त ?
साबधान ! कतै हजुरहरु पनि यसरी नै ठगिनु भयको त छैन ! टन्क बुढाथोको फेक आइडी बनायर , ठगि
२१ कार्तिक २०७५, बुधबार १८:००
२१ कार्तिक २०७५, बुधबार १८:०० November 7, 2018 chhadkeप्रमुख समाचार / समाचारNo Comment on पोखरामा सुन्तलाको व्यापार बढ्यो
तिहारको आगमनसँगै पोखरा क्षेत्रमा सुन्तलाको व्यापार बढेको छ । भाइटीका पर्वमा सुन्तला बढी बिक्री हुने गरेकोले मौसमी फल सुन्तलाको व्यापार बढेको हो । पोखराको फलफूल बजारमा छिमेकी स्याङ्जा, तनहुँ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ जिल्लाबाट भित्रिने गर्छ । ती सुन्तला तराईको पूर्वी क्षेत्र काँकडभिट्टा, विर्तामोड, चारआली, दमक, लहान, पर्सा, हेटौँडालगायतका बजारमा थोकरुपमा बिक्री हुने गरेको छ । किसानले फलफूलका व्यापारीसँग मिलेर सात प्रतिशत मुनाफा लिएर सुन्तला बिक्री गर्छन् । पोखराबाट वर्षेनी रु २० देखि २५ करोड मूल्यको सुन्तला बिक्री हुने यस व्यवसायमा संलग्न केशव मैनालीले बताउनुभयो ।
सुन्तलाको बोक्रा यतिखेर हरियोनै देखिन्छ । तर, तिहारको मागलाई ध्यानमा राखी विगत तीन चार दिनदेखि सुन्तला पोखरामा भित्रिन थालिएको हो । बोक्रा हरियो भए पनि मीठो रहेको स्थानीय ऋषिराम बरालले बताउनुभयो । स्याङ्जाको भिरकुट नगरपालिकाको हेलु बस्ने किसान डब्बलप्रसाद अर्यालले आफूले रु ५० लाखको सुन्तला गत वर्ष बिक्री गरेको बताउनुभयो ।
अर्का, व्यापारी चन्द्र गुरुङले आफूले सुन्तला किसानसँग खरीद गरेर पोखराका साथै लहान, हेटौँडा र पर्साका सुन्तला व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेको बताउनुभयो । यसको व्यापार पहिलोपल्ट शुरु गर्नुभएका दिलबहादुर गोतामेले तनहुँको बगैचाबाट सुन्तला खरीद गरिएको बताउनुभयो । पहिलोपटक भएकाले मूल्यसाथै सुन्तलाको पहिचान गर्न नसक्दा घाटा हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । बजारमा यतिखेर स्थानीयसाथै तराई पूर्वी क्षेत्रका व्यापारीको सुन्तला किनमेलमा व्यस्त छन् । टाढाका व्यापारीले ट्रकबाट सुन्तला लान्छन् । केही दिनपछि ठूलो परिमाणमा सुन्तलाको कारोवार हुने यस व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी बताउँछन् । रासस
आयो दु:खद खबर ,देउसी खेल्न हिँडेको टोली बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा २७ जना घाइते, अब पढ्नुहोश पुरा समाचार !!
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १४:१९
आयो दु:खद खबर ,जीप दुर्घटनामा एकजनाको ज्यान गयको छ भने , दुईजना घाइते भयका छन !
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०३:४१
नेपालीहरुको पर्ब तिहारको लागी , भारत बाट आयको साढे तिनलाखको पटखा नस्ट ,
२१ कार्तिक २०७५, बुधबार १६:५४
View all posts by chhadke →
आज विशेष दिन ,अर्थात् लक्ष्मी पुजा , आज सुत्नु भन्दा पहिला यस्तो कार्य गर्नुहोला ! सकेसम्म रातको १२ बजेसम्म नसुती बस्नुहोला !
अहिलेका भाइरल बालकलाकारको घरमा बिदेशबाट सम्म पाहुना आउन थालेका छ्न !
२४ कार्तिक २०७५, शनिबार १४:५७
२४ कार्तिक २०७५, शनिबार ०१:३८
२३ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १४:३३
२३ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १३:५६
२३ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १३:०१